साहित्यकार ‘चट्याङ मास्टर’ र भट्टराई सम्मानित
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, काठमाडौँ । भैरव पुरस्कार गुठीले हास्यव्यङ्ग्य साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने कृष्णमुरारी गौतम ‘चट्याङ मास्टर’ र शेषराज भट्टराईलाई शुक्रबार सम्मान गरेको छ । हास्यव्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालका स्मृतिमा स्थापित ‘भैरव पुरस्कार’ भक्तपुर निवासी गौतमलाई र ‘भैरव प्रतिभा पुरस्कार’ पोखराका भट्टराईलाई प्रदान गरिएको हो । भैरव पुरस्कार पाउनुभएका गौतमले रु ५० हजार र प्रतिभा पुरस्कार पाउने भट्टराईले रु २५ हजारसहित प्रशंसापत्र प्राप् ... बाँकी अंश»
२०७३ पौष २१ बिहिबार, काठमाडौँ । नेपाली भाषासाहित्यको प्रयोग र विकासमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका साहित्यकार कमलमणि दीक्षितको स्मृतिमा शोकसभा आयोजना गरिएको छ । मध्यबानेश्वरस्थित रत्न पुस्तकालयले आयोजना गरेको उक्त सभामा उनको बहुआयामिक व्यक्तित्वमाथि प्रकाश पार्दै श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरियो । अभिभावकले आफूलाई खाजाका लागि दिएको पैसाले किताब किनेर नेपाली भाषा र साहित्यको प्रवद्र्धनमा लाग्नुभएका दीक्षितले मदन पुस्तकालय र मदन पुरस्कार गुठी स्थापना गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
साहित्यिक सङ्ग्रहालयका लागि ३ लाख सङ्कलित
२०७३ पौष १६ शनिबार, काठमाडौँ। साहित्यिक सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि आयोजना गरिएको ‘काव्य सप्ताह’मा करिब तीन लाख सङ्कलन गरिएको छ । ‘कपन–बानेश्वर साहित्यिक साप्ताहिक’ले यही पुस ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म रामहिटी साहित्य सदनमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा ५० कविले एकल वाचनका रुपमा दर्जनौँ कविता र सय जनाले एक एक कविता वाचन गरेका थिए । बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म गरिएको कार्यक्रममा रामबहादुर पहाडी, वेदमणि घिमिरे, विजय चालिसे, चट्याङ् मास्टर, डा रामप्रसाद ज्ञव ... बाँकी अंश»
भूपी शेरचनको जन्मजयन्तीः ‘अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी.....’
२०७३ पौष १२ मंगलबार, काठमाडौं । नेपाली आधुनिक कविताकाका धुरन्धर कवि भूपी शेरचनको ८१ औं जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कविताका लागि साझा पुरस्कारबाट सम्मानित भूपिको लेखनमा व्यङ्ग्यसूत्र थियो । वास्तविक नाम भुपेन्द्रमान रहेका भूपी मुस्ताङको थाक टुकुचेमा १९९२ साल पुस १२ गते जन्मेका थिए । उनको २०४६ जेठ १ गते निधन भएको थियो । मदन पुरस्कार विजेता भूपीका परिवर्तन नाटक, नयाँ झ्याउरे कविता, निर्झर कविता र घुम्ने ... बाँकी अंश»
झमककुमारीको ‘प्रेमिल आकाश’ सार्वजनिक
२०७३ पौष १० आइतबार, धनकुटा । साहित्यकार डाक्टर झमककुमारी घिमिरेको प्रकाशित १३औँ साहित्य कृति कविता सङ्ग्रह ‘प्रेमिल आकाश’ गृह जिल्लामा सार्वजनिक गरिएको छ । शनिबार धनकुटा सदरमुकाममा झमक घिमिरे साहित्य कला प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रेमिल आकासमा समेटिएका ४९ वटा कविताको २४ जना स्रष्टाले विभिन्न आयामबारे परिचर्चासमेत गरेका छन् । कविता सङ्ग्रह परिचर्चा सँगै यसै वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले झमकलाई विद्यावारिधिको मानार्थ उपाधि दिए ... बाँकी अंश»
साहित्यको संरक्षण गर्न सरकार तयार : मन्त्री थापा
२०७३ पौष ९ शनिबार, काठमाडौं । साहित्यिक सङ्ग्राहलय स्थापनाको सहयोगार्थ कपन–बानेश्वर साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिकाको आयोजनामा शनिबारबाट काव्य सप्ताह सुरु भएको छ । शनिबार राजधानीको साहित्य सदन नेपाल रामहिटि बौद्धमा उक्त सप्ताहको सुरु भएको हो । सप्ताहको उद्धघाट्न स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले गरेका हुन् । कार्यक्रममा विविध साहित्यिक गतिविधिसँगै काव्य गोष्ठी समेत रहने कार्यक्रमका संयोजक कपन–बानेश्वर साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक निब ... बाँकी अंश»
२०७३ पौष ४ सोमबार, काठमाडौं । वरिष्ठ कलाकार रत्न बेहोसी बज्राचार्यलाई एक समारोहकाबीच लोकगायकको उपाधिबाट सम्मान गरिएको छ । कलाकार परिषदले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘रत्न बेहासी सम्मान साँझ’मा उक्त उपाधि प्रदान गरिएको हो । ललितपुरको अग्नि पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न उक्त समारोह सम्मानित रत्न बेहोसी र प्रमुख अतिथि मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई कार्यक्रमस्थल प्रवेशद्वारबाट स्वागत सुरु भएको थियो । बेहोसीको जीवनसम्बन्धी भिडियो बायोग्राफी प्रदर्शनपश्चात सुरजवीर बज्राच ... बाँकी अंश»
२०७३ मङ्सिर १८ शनिबार, काठमाडौँ। आफ्ना बालसखा उमे कामीको खास नाम कुलुङ्गा हो भन्ने दीनानाथ शर्मालाई धेरै पछि थाहा भयो । समाजमा दलितका नाममा हुने गरेको विभेदबारे शर्माले उमे कामी साथी भएबापत् सानै उमेरमा भोगिसकेका थिए । दीनानाथसँगै माओवादी सशस्त्र युद्धमा होमिएका उमे कामी अहिले जनविद्रोहको विचार बोकिरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)मा आबद्ध छन् भने शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता हुन् । बागलुङको दलित परिवारमा जन्मिएका दुवैले ल ... बाँकी अंश»
२०७३ मङ्सिर १८ शनिबार, “तैँले बिहे गरिस् भने त गीत गाएरै पाल्चे यार !” कृष्ण दाईले बारम्बार यहीँ कुरा दोहो¥याइरहन्थे । मलाई हाँसो लाग्थ्यो । नेपालका चर्चित गायक गायिकाहरु आफ्नो जीवन धान्न नसकेर अमेरिकातफ्र्m भासिहरहेको बेला दाईको दाबी हाँसो लाग्दो नै थियो । घरको अवस्था, पारिवारिक परिवेश, आफ्नो बढ्दो उमेर सबैले मलाई निरन्तर बिहेको निम्ति प्रेशर गरिरहेका थिए । घरको जेठो छोरो भएकोले केही तनाव पनि थियो । आफन्त छिमेकी सबैले बिहे गर्न बारम्बार सम्झाइरहन्थे । यस् ... बाँकी अंश»
भिजेको तन !
२०७३ मङ्सिर २ बिहिबार, काठमाडौ । पानी दर्केको छ । म सानो छाता ओढेर हिंडेकी छु तर म भिजेकी छैन । तैपनि भिज्छु कि , भन्दै हिँड्दै थिए । एकाएक मेरा आँखा बाटो पारी गयो । एउटा जोडी सानो छाता ओढेर हिँडिरहेका छन् । जानी जानी केटी भिज्न खोज्दैछे ! केटाले तानेर ल्याउँछ आफुतिर अनि बेसरी कँस्छ । लजाउँछे केटी । लाग्छ, उनीहरूलाई सारै मजा आएको छ भिज्नमा । गाडीले उछिट्टाएको पानीले भिजे उनीहरू । तापनि बेमतलब भएर अँगालिएर हिँडेका छन् । म फेरी सम्हालिन खोज्छु, म भिजें कि? भनेर, तर छ ... बाँकी अंश»
लिबाङमा कवि क्षेत्रीले सुनाए दर्जन बढी रचना
२०७३ कार्तिक २८ आइतबार, रोल्पा । कुशल राजनीतिज्ञ एंव प्रगतिशिल कवि पुरण क्षेत्रीले शनिबार रोल्पा सदरमुकाम लिबाङस्थित बाचनालयमा एक दर्जन बढी कविताहरु सुनाएका छन् । ललित साहित्य परिषद्, रोल्पाको द्वैमासिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको एकल रचना वाचन कार्यक्रमको २७ औं श्रृंखलामा क्षेत्रीले आफ्ना रचनाहरु सुनाएका हुन् । एकल रचना बाचनका क्रममा क्षेत्रीले ‘कवितामा फुल्ने म भित्रको मान्छे’, ‘म एउटी आमा’, ‘देशले हाम्रो उत्साह खोजिरहेछ’, ‘महोदय ऊ असली मा ... बाँकी अंश»
"अनेसास जापानको आयोजनामा कविता प्रतियोगिता सम्पन्न"
२०७३ कार्तिक २२ सोमबार, जापान। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जापानको साहित्यिक कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्मी जयन्ती, अनेसास जापान सिटी मनी साहित्य पुरस्कार वितरण साथै ३८औं साहित्यिक शृङ्खला जापानको टोकीयोमा सम्पन्न भएको छ । साहित्यलाई माया गर्ने जापानमा रहेकाहरुको प्रतिभा उजागर गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले प्रतिस्प्रर्धात्मक कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो । करिब ३७ जना सहभागी जापानव्यापी खुला कबिता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट तीन कवि रविन शर्मा, दिप प ... बाँकी अंश»
महाकवि देवकोटाको जयन्तीमा दुई कृति विमोचित
२०७३ कार्तिक १४ आइतबार, काठमाडौं । स्थानीय चाबहिलस्थित शान्तिगोरेटो टोलका बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीले महाकवि देवकोटाको १०८ औं जन्मजयन्ती तथा तिहार, नेपाल संवत् एवं छठ पर्वका अवसरमा शनिबार शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरे । हेल्प नेपालका अध्यक्ष अरुणमानसिंह बस्नेतका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रममा गीतकार प्रमोद ढुङ्गानालाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । स्थानीय विनायक स्कूलमा भएको सो कार्यक्रममा कवि महेश्वर खनाल र रत्ननिधि रेग्मी शुक ... बाँकी अंश»